တော်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
တော်ဝင်သမိုင်းကော်မရှင် ( မြန်မာ: တော်ဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ကော်မရှင် , [tɔ̀wìɴ mjəmà nàɪɴŋàɴ θəmáɪɴ kɔ̀məʃìɴ] မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်းဘောင် မင်းဆက် ( )) သည် Konbaung ခေတ်၏ စံတရားရုံးရာဇဝင်များ ၊ မှန်နန်းရာဇဝင်(၁၈၃၂) နှင့် ဒုတိယရာဇဝင် (၁၈၆၉) တို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 
၁ ကော်မရှင် (၁၈၂၉–၁၈၃၂)
၂ ကော်မရှင် (၁၈၆၇-၁၈၆၉)
ပထမအင်္ဂလိပ် - မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၂၄ မှ ၁၈၂၆ ) အပြီးသုံးနှစ်အကြာမေလတွင်ဘုရင့်နောင်သည်ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏တရားဝင်ရာဇဝင်ကိုရေးရန်တော်ဝင်သမိုင်းဝင်ကော်မရှင်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကတရားဝင်တရားဝင်ရာဇ ၀ င်ဖြစ်သည့် မဟာရာဇာသည်တောင်ကြီး မင်းဆက် ၏စံချိန်ဖြစ်သောရှေးဟောင်းသမိုင်းမှအောက်တိုဘာ ၁၇၁၁ အထိဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ဘုရင်များက မဟာရာဇာ ကိုခေတ်မီအောင် ပြုပြင်ရန် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှု, ရာဇဝင်သစ် ဘကြီးတော်ရဲ့နောင်တော်များနှင့်အဘိုးတို့ကတာဝန် (New Chronicle), ဘိုးတော်ဘုရား သစ်ကို Chronicle အစောပိုင်းကရာဇဝငျမြား၏ပြင်းထန်သောဝေဖန်မှုများပါရှိသောကြောင့်၎င်း, လက်ခံခဲ့သည်မခံခဲ့ရ။ ပုဇွန်တောင်သည်ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှကျောက်တော် များအပါအ ၀ င်ကျောက်စာတိုင်များအပါအ ၀ င်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းအားဖြင့် မဟာဗောဓိ တရား၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးရန် ရတနာသစ် ၊ တနင်္သာရီတိုင် မ် စာရေးဆရာအားအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 
ကော်မရှင်၏အင်္ဂါသင်ယူဘုန်းတော်ကြီးများ, တရားရုံးသမိုင်းပညာရှင်နှင့်တရားရုံးပုဏ္ဏားပါဝင်သည်:  အဆိုပါကော်မရှင်ပထမဦးဆုံး 11 ရက်မေလ 1829 (နယုန် 1191 ME ၏ 1st လဆန်း) ရက်နေ့တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပ။ သုံးနှစ်နှင့်လေးလအကြာတွင်ကော်မရှင်သည် ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် Hmannan Yazawin ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသမိုင်းကိုဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ 
မုံရွာဇေ ၀awun ဆရာတော် မုံရွာဇေ ၀၉ ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ဆရာတော် ကော်မရှင်အကြီးအကဲ
</br> အယ်ဒီတာအတိုင်ပင်ခံ; မဟာရာဇာ နှင့် ရတနာသစ် ကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည် 
သာကေတဆရာတော် Thawkabin ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ဆရာတော်ကြီး အယ်ဒီတာအတိုင်ပင်ခံ; မဟာရာဇာ နှင့် ရတနာသစ် ကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်
မဟာဓမ္မသင်္ကြန် ရှငျဘုရငျမှဝန်ကြီးကောင်စီဝင် မဟာရာဇာ နှင့် ရတနာသစ် ကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်
ဦး Yauk တော်ဝင်မြင်းစီးသူရဲဝန်ကြီး အသေးစားရာဇဝင်များနှင့်ကဗျာများကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဦး ခင် တော်ဝင် Messenger အသေးစားရာဇဝင်များနှင့်ကဗျာများကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဦး မောင် Privy ကောင်စီနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
သီရိမဟာနန္ဒသင်္ကြန် ဒုဝန်ကြီး၊ သီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ဦး ဝ ဒုဝန်ကြီး၊ Singu ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Zayadewa တရားရုံးပုဏ္ဏား တရားရုံး၏အခမ်းအနားဓလေ့ထုံးတမ်းများအတွက်အိန္ဒိယရင်းမြစ်များစစ်ဆေးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်
Kamondra တရားရုံးပုဏ္ဏား တရားရုံး၏အခမ်းအနားဓလေ့ထုံးတမ်းများအတွက်အိန္ဒိယရင်းမြစ်များစစ်ဆေးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်
ဦး လျှံ တရားရုံးစာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
လူးကြီး တရားရုံးစာရေး ရေးပါ
အောင်သ တရားရုံးစာရေး ရေးပါ
ဒုတိယကော်မရှင်ကို ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ ဆိုးရွားသည့် ဒုတိယအင်္ဂလိပ် - မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၅၂) ပြီးနောက် ၁၅ နှစ်ခန့်အကြာတွင်ဖြစ်ပြီး Crown Prince Kanaung Mintha ကို ပြင်းထန်သောပုန်ကန်မှုဖြစ်ပွားပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ လှုပ်ခတ်သွားသော မင်းတုန်းမင်း သည်နောက်ထပ်ပညာရှင်ကော်မတီတစ်ခုကို Hmannan အားအဆင့်မြှင့်ရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်တွင်အဖွဲ့ဝင်ငါး ဦး ပါ ၀ င်သည်။ အကြီးတန်းတရားရုံးအရာရှိများ၊ စာကြည့်တိုက်မှူးများနှင့်ကျမ်းတတ်များပါဝင်သည်။  ပထမကော်မရှင်သည်ပထမအင်္ဂလိပ် - မြန်မာစစ်ပွဲနှင့်ယှဉ်လျှင်ရပ်တန့်သွားသော်လည်းဒုတိယကော်မရှင်အနေနှင့်ပြိုကွဲလုနီးပါးဖြစ်နေသောတိုင်းပြည်တည်ရှိခဲ့သောစစ်ပွဲနှစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ ကော်မရှင်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် ၁၈၅၄ ခုနှစ်မှတ်တမ်းကိုခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏စစ်ပွဲနှစ်ခုဖြစ်သည့်သမိုင်းကြောင်းကို တင်အောင် ၏အဆိုအရ၊ "စစ်မှန်သောသမိုင်းပညာရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြီးမားသောအမျိုးသားရှုံးနိမ့်မှုများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်"  တကျိပ် volumes ကိုဒုတိယ Chronicle 1869. ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် 
↑ ၁.၀ ၁.၁ Allot et al 1989: 13–14
↑ Thaw Kaung 2010: 53–55
Allot, Anna; Patricia Herbert; John Okell (1989). Patricia Herbert, Anthony Crothers Milner (ed.). အရှေ့တောင်အာရှ - ဘာသာစကားများနှင့်စာပေများ - ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန် ။ ဟာဝိုင်ယီစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။ ISBN Allot, Anna; Patricia Herbert; John Okell (1989). Patricia Herbert, Anthony Crothers Milner (ed.). Allot, Anna; Patricia Herbert; John Okell (1989). Patricia Herbert, Anthony Crothers Milner (ed.).
Htin Aung ၊ မောင် (၁၉၆၇) ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်း နယူးယောက်နှင့်လန်ဒန်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း။
Royal Historical Commission (1829–1832). Hmannan Yazawin (ဗမာ) 1-3 (2003 ed ။ ) ။ ရန်ကုန် - ပြန်ကြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊
Khin Maung Nyunt (2009) ။ "ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်" မြန်မာရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များအသင်း။
Thaw Kaung, U (2010). မြန်မာ့သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏ရှုထောင့်များ ။ ရန်ကုန် - ဂန်းမြိုင်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တော်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်&oldid=563990" မှ ရယူရန်
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။